यो डरलाग्दो केसमा फसेपछि अभिनेत्री ज्याकलिनलाइ सलमानले पनि छोडे साथ – Patrika Nepal
मंग्सिर २२, २०७८ बुधबार 40
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजको नाम मनी लान्ड्रिङ प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको छ । यसपछि आइतवार ज्याकलिनलाई मुम्बई एयरपोर्टमा हिरासतमा राखिएको थियो र केही समयपछि घर फर्काइयो । ज्याकलिनले अनुमति बिना देश छोड्न पाउँदैनन्। ज्याकलिनको स’म्बन्ध २०० करोड रुपैयाँको मनी लान्ड्रिङको आरोपमा परेका सुकेश चन्द्रशेखरसँग रहेको बताइएको छ । अब सलमान खानले आफ्नो आगामी ‘दबंग’ टुरका लागि ज्याकलिनको सट्टा अरु अभिनेत्रीलाई लिन सक्ने बताइएको छ ।
केही रिपोर्टमा विश्वास गर्ने हो भने सलमान खान ज्याकलिनको असल साथी हुन् तर अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा उनले ज्याकलिनको सट्टा डेजी शाहलाई साथ लिन सक्नेछन् । ठग सुकेश चन्द्रशेखरको मुद्दामा आफ्नो नाम आवोसभन्ने सलमान खान चाहँदैनन् । ‘बलिउड हंगामा’ को रिपोर्ट अनुसार अब सलमान खानले ज्याकलिन फर्नान्डिसलाई ईडीले सोधपुछ गर्न सक्ने भएकाले डेजी शाहलाई साथमा लैजाने मन बनाइसकेका छन् ।
सलमानको टुर आगामी सप्ताहांतबाट सुरु हुँदैछ जसमा आयुष शर्मा, प्रभुदेवा, सुनील ग्रोवर, साई मांजरेकर र शिल्पा शेट्टी जस्ता कलाकारहरु सहभागी हुनेछन् । ज्याकलिन फर्नान्डिज पनि यो टुरको एक हिस्सा थिइन् तर अब उनलाई जान गाह्रो देखिन्छ। ज्याकलिनलाई ईडीले यसअघि पनि पटक पटक सोधपुछ गरिसकेको छ । ज्याकलिनमाथि ठग सुकेश चन्द्रशेखरबाट करोडौंको उपहार लिएको आरोप छ । तर, ज्याकलिनले आफू ठगीको सि’कार भएको बताएकी छिन् ।
Prevनि’र्वाचनमा पू’र्वराजाको यति ठु’लो ह’स्तक्षेप,हात लाग्यो एथेष्ट प्र’माण ! यस्तो छ ‘बि’ज्ञप्ति’
Nextलामो समयको प्रेम पछि र चाइनिज युवासँग बिहे गरिन मोरङकी आयुषाले ! (भिडियो)
जन्म दिने बि’त्तिकै सं’सार छो’डिन आमाले, बच्चालाई काखमा लिएर कलेज पढाउन जान्छन् बुवा, भावुक बनाउने यी बाबुको कथा यस्तो छ..
भाग्यमा छ भने भगवानले २० करोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घरभित्र आउँछ धन …
सुरक्षाकर्मीको गो`ली लागेर कम्तीमा ११ जनाको मृ`त्यु